Bulshada Gobolka Nugaal oo Ka shiray Sidii Waddo laami ah looga Hirgalin lahaa Eyl – Radio Daljir
Agoosto 25, 2015 12:11 g 0
Talaado, Ogoosto 25, 2015 (Daljir) — Kulan ballaaran oo looga hadlayay dhismaha Waddo isku xiri doonta deegaanada Eyl iyo Dongorayo ayaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Eyl, Waxaana kulankan ka soo Qayb-galay qaybaha kala duwan ee Bulshada deegaanadaas.
Xubnaha kulankan joogay waxaa kamid ahaa duqa degmada Eyl Muuse Cismaan Yuusuf, guddoomiyaha guddiga dhaqaale ururinta wadadaas Aadan Maxamed Ciise Gaadaale, guddoomiye ku xigeenka hay’adda waddooyinka Puntland Maxamuud Cali Gurey iyo xildhibaano ka tirsan barlamaanka Puntland.
Waxaa kulankan diiradda lagu saaray sidii bulshada deegaanadaas ay uga qayb-qaadan lahaayeen dhismaha jidkan oo la sheegay in uu muhiim u yahay isku xirka dadka iyo gaadiidka ,iyadoo ay goob-joog ahaayeen qaar kamid ah ganacstada gobolka Nugaal.
“Baahida shacabka halkan ku nool kow iyo labo ayey ka tahay dhismaha wadada Eyl soo gasha, waadna la socotaan in 30-KM oo kamid ah jidkan uu yahay dhagax iyo Jay ay dadku dhibaato ku qabaan “ ayuu yiri duqa degmada Eyl Muuse Cismaan oo kulanka ka hadlay.
Guddoomiyaha guddiga dhaqaale ururinta wadada Eyl iyo Dongorayo Aadan Maxamed (Gaadaale ) oo kormeeray xaafadaha Daawad iyo Badey ee degmada Eyl ayaa ka dalbaday bulshada in ay ka qayb-galaan dhismaha wadadan.
“Socdaalkii aan ku soo marnay ,Qarxis ,Dongorayo iyo Eyl waxa ay tahay sidii aan bulshada u fahan-siin lahayn muhiimadda uu jidkan u leeyahay bulshada iyo sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen dhismihiisa “ ayuu yiri Gadaale.
Xildhibaan Cabdisalaan Xuseen Bootaan oo kamid ah mudanayaasha barlamaanka Puntland ayaa isna sheegay in dowladda ay ku cadaadinayaan sidii kaalin muuqata ay uga qaadan lahayd dhismaha jidkan oo muddo laga arinsanayay.
Ugu dambeyn, qaar kamid ah dadkii ka soo qayb-galay kulanka ayaa dhismaha wadada ugu deeqay lacago ,boosas iyo waliba xoolo nool ,iyadoo qaar kamid ah shirkadaha ka howl-gala Puntland ee xafiisyada kuleh Eyl loogu baaqay in ay ka qayb-galaan dhismaha jidka.